यी हुन् सन्तान प्राप्तिका उचित ६ सम्भोग आशन ? - inaruwaonline.com
यी हुन् सन्तान प्राप्तिका उचित ६ सम्भोग आशन ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक २२, २०७२ समय: ११:१५:५७
धेरै दम्पतीहरुलाई सन्तान कसरी राम्रो जन्माउने रु कसरी सही गर्भधारण गर्नेलगायतका विषयमा विविध जिज्ञाशाहरु रहने गरेका छन् । गर्भधारणा नहुने समस्याले पनि धेरै दम्पतीहरुलाई पिरोलेको देखिन्छ ।
सेक्सोलोजिष्टहरुले गर्भधारणका लागि उचित सेक्स आशनका बारेमा पनि विभिन्न धारणाहरु सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुकाअनुसार गर्भधारणाका लागि महिला तल र पुरुषमाथि रहेर सम्भोग गर्ने क्रिया उचित हुन्छ । उनीहरुको मत छ कि स्त्री माथि रहने र पुरुष तल रहने आशनमा सम्भोग गर्दा गर्भ रहने सम्भावना कम हुन्छ ।
किनभने, महिला माथि र पुरुष तल भएको अवस्थामा पुरुष स्खलित हुँदा उसको वीर्य स्त्रीको योनी भित्र प्रवेश गर्नुको साटो बाहिर निस्कन्छ । यसलाई ‘विपरित रति सम्भोग’ भनिन्छ ।
‘विपरित रति सम्भोग’का कारण अण्डाणुको निषेचनका लागि पर्याप्त मात्रामा वीर्य गर्भासयमा पुग्दैंन । जसका कारण प्रजन्न प्रक्रिया सम्पन्न हुन पाउँदैंन् । यसका कारण सन्तान प्राप्तिका लागि मिसनरी पोजिशन, जसमा स्त्री सुतेकी हुन्छन्, त्यस्ता आशनहरु उपयुक्त हुन्छन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यो छ कि स्त्री महिनावारी सुरु भएको १४ दिनभित्र अण्डाणु बन्ने प्रक्रिया उच्च हुन्छ । यस कारण महिनावारी सुरु भएको १३ देखि १६ दिनसम्म प्रत्येक रात सम्भोग गर्नुपर्छ । जसमा गर्भ रहने अत्याधिक सम्भावना हुन्छ । त्यसबाहेक अन्य समयमा गर्भ रहेन सम्भावना कम हुने गरेको पाइन्छ ।
सन्तान प्राप्तिका लागि उचित ६ सम्भोग आशन
१ पहिलो आशन : सम्भोगका लागि स्त्री तल सुत्ने, पतिलाई माथि चढाउने । याद राख्नुस् यसो गर्दा पुरुष शरीरको भार आफ्नो शरीरमा होइन् आफ्नो दुई पाखुरामा राख्नुपर्छ । दुईको शारिरीक समागम केवल लिंग र योनी तथा केही हदसम्म जाँधसम्म हुन्छ । जसबाट तपाई भाररहित सम्भोग सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ ।
२ दोस्रो विधी : यो छ कि स्त्री सुत्ने र दुवै खुट्टा फैलाउने । पुरुष स्त्रीको जाँघमा बसेर लिंग योनीमा प्रवेश गराउनुपर्छ । यस आशनमा पनि पुरुषको शरीरको सारा भार विस्तरामाथि हुन्छ । जसले स्त्रीको जाँघमा पनि पुरुषको भार कम पर्छ ।
३ तेस्रो आशनः यो आशनमा स्त्रीले सुतेर आफ्नो दुवै खुट्टा हावामा उठाउँदैं पतिको काँधमा राख्नुपर्छ, र नजिकैबाट पुरुषले स्त्रीभित्र आफूलाई समाहति गर्नुपर्छ । यसले पुरुषको सामान्य भार पनि स्त्रीको शरीरमा पर्दैन । यस आशनसले सम्भोगमा नयाँपन ल्याउनुका साथै लिंग पनि भित्रसम्मै पसाउन सकिन्छ । यसले वीर्यको स्रावलाई स्त्रीको गर्भासय भित्री भागका हुन्छ, जसका कारण परागसेचनका लागि बिम्बलाई भेट्न कम यात्रा गर्नुपर्छ ।
४ चौथो आशन : यो तेस्रो आशनमा थोरै परिवर्त गरेर हासिल गर्न सकिन्छ । यसमा स्त्रीले आफ्नो दुवैं खुट्टा पतिको काँधमा राख्नुको सट्टा घुडाबाट मोडेर हल्का फैलाउनुपर्छ । यसमा पनि पति नजिकैबाट प्रवेश गरेर सम्भोग प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
५ पाँचौ आशन : सरल अवस्था त्यो हो जसमा पुरुष उभिएको तर स्त्री सुतिरहेको अवस्थामा हुन्छन् । स्त्री बेडको आखिरी भागमा सुत्ने र पति बेडको बाहिर खडा भएर स्त्रीका दुवै जाँघलाई हातले समात्ने । त्यसपछि लिंगलाई स्त्रीको यौनीमा प्रवेश गराउने । यसबाट स्त्रीमाथि पुरुषले कम धक्का पर्न जान्छ ।
६ छैटौं आशन : स्त्री र पुरुष दुवै साइडमा कोल्टे फर्केर पनि सम्भोग गर्न सक्दछन । तर, यसमा सजिलो त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला स्त्रीको सेक्सको चरम चाहना हुन्छ । जसका कारण उनको योनी निकै चिप्लो हुन्छ र पुरुषले सजिलैं आफ्नो लिंगलाई योनीमा पसालेर सजिलैं सम्भोगको क्रिया पूरा गर्न सक्दछन् ।